Akhri: Magcayada 4 nin oo Alshabaab ku toogteen Baardheere & sababta loo dilay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhri: Magcayada 4 nin oo Alshabaab ku toogteen Baardheere & sababta loo dilay
Mareeg.com: Alshabaab waxey shalay galab degmada Baardheere ee gobolka Gedo ku toogteen 4 nin oo ay ku eedeeyeen iney ahaayeen jawaasiis.
Haddaba Alshabaab ayaa sheegay in 2 ka mid ah raggaas qorsheeyeen weerar lagu qaaday saraakiil ka tirsan ururuka oo mid la dilay midna ka badbaaday.
Qaalli aan magaciisa la sheegin oo ka tirsan Alshabaab ayaa dadku u sheegay in afarta qof ee la dilay ay u kala basaasayeen dowladda Soomaaliya, Mareykanka iyo Itoobiya.
Magacyada ragga la toogtay waxaa lagu kala sheegay:-
1- Cumar Maxamed Kheyre oo 29 jir, ninkaas waxaa lagu eedeeyey inuu ka shaqeeyey qorshihii Mareykanku bishiin Janaayo 2014 ku dilay sarkaal ka tirsanaa Alshabaab, kaasoo la oran jiray Sahal Camuu oo lagu duqeeyey duleedka degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose.
2- C/weli Maxamed Siraad, oo 40 jir ah, waxaa lagu eedeeyey inuu u shaqeynayey CIA-da Mareykanka, islmarkaana uu agaasimay weerar fashilmay oo Mareykanku 5-tii October, 2014 ku qaaday magaalada Baraawe, iyadoo la doonayey in la dilo sarkaal ka tirsan Alshabaab oo la yiraahdo C/qaadir Maxamed C/qaadir, kaasoo ka badbaaday.
3- Nuur Sheekh Rashiid Xaaji Xirsi, oo 43 jir ah, waxaa Alshabaab ku eedeeyeen inuu u shaqeynayey ciidamada Itoobiya ee ku sugan xadka Soomaaliya iyo Itoobiya, gaar ahaan xadka dalkaas Soomaaliya kala wadaago Bakool iyo Hiiraan.
4- C/fataax Cusmaan Cabdulle oo 21 jir ah, waxaa lagu eedeeyey inuu ka tirsanaa ciidamada sirdoonka Soomaaliya, islamarkaana uu rabay inuu Alshabaab ku biiro si uu u raadiyo macluumaad ku saabsan dadkii ka dambeeyey weerarkii Alshabaab ku qaadeen xarrunta ganacsiga Westgate ee Nairobi bishii September 2013.
Sida laga dhadhansan karay khudbada qaalliga Alshabaab, inta badan ragga la dilay ayaa ka tirsanaa Alshabaab, maadaama qaaligu sheegay in labo ka mid ah ragaas mid ka mid ah qalab Mareykanku soo dhiibay geliyey boorsada Sahal Camuu oo la dilay, halka mid kalana qalab dhigay guriga sarkaalka badbaaday.
Dowladda Turkiga oo garsoorka ka taageereysa dowladda Soomaaliya
Macalin wax ka dhiga Jaamacadda SIMAD oo lagu dhaawacay qarax lagu xiray gaarigiisa